Ceebayn La’aan: Guddida Abaaruhu Waxay Fudaydisay Musuq-Maasuqii Ugu Weynaa Somaliland Maxamuud Jaamac Axmed (Xamdi) | Togdheer News Network
Ceebayn La’aan: Guddida Abaaruhu Waxay Fudaydisay Musuq-Maasuqii Ugu Weynaa Somaliland Maxamuud Jaamac Axmed (Xamdi)
Miisaaniyada Qaranka waxa ku jiray muddo dhawr sannadood ah lacago badan oo ku saabsan wax ka qabashada abaarta. Markaa maadaama aydaan marnaba soo hadal qaadin arrintaasi miyaanay ahayn inaad xalaalayseen lacagtaasi la musuq-maasuqay, maadaama ay caddahay in aan meeshii loogu talo galay la galin, oo haddii ay taasi dhici lahayd aanay marnaba abaartan oo kale inagu dhacdeen. Iyadoo arrintaasi ay caddayn idiinku filan tahay inay xukuumaddu sheegtay inay toban milyan oo doolar ay ku filan yihiin ka hor tagga abaaraha, talaw miyaanay guddidani arag in sannadka qudha ay miisaaniyada qaranka ugu jiraan lacago ka badan toban milyan oo ku filiqsan hayadaha ku magacaaban wax ka qabashada abaaraha? Markaa miyay xalaaleeyeen lacagahaasi la musuq-maasuqay? Ficilkoodani ka aamuska arrintaasi miyaanuu fudaydin in aan waxba la iska waydiin musuqii hore u dhacay?
Gudidani su’aasha ugu horraysa ee is waydiin lahayd waxay ahayd: talaw waa maxay sababta dhabta ah ee la noo magacaabay? Ma wax aanay dawlada oo dhami awoodin ayay awood u leeyihiin? Mise waa ka dhab wasiirka madaxtooyada marka uu leeyahay in hadafku yahay midaynta hawlaha gurmadka? Miyaanuu isla wasiirku ahayn kii ku baaqaayay in qaab qabiileed ay reeruhu isku kaalmeeyaan? Meeday midaynta hawlaha gurmadka markaasi? Sidoo kale waligeed way kala madax-bannaanaan jireen dadaalada xukuumada iyo waxyaabaha ay shacabku gaar u qabsadaan? Mise waxa loogu xil-saaray guddidan inay lacagta soo ururiso maadaama aanay jirin kalsooni lagu qabo xukuumada? Haddii aanay kalsoonidaasi jirin miyay baadheen sababteeda?
Waxa dhici karta inay guddidani is tidhi “Dadkiina si daacad ah u caawiya” maadaama gacanta loo galiyay awoodii maaliyadeed iyo maamulba, dawladuna ay kaliya ilaalinta amniga ay qaabilsanayd sida ay ku dhawaaqday guddidu.. su’aasha is waydiinta mudan waxay noqonaysaa talaw aqoon miyay u leedahay guddidani qaabka gurmadka abaaraha? Mise arrintani waa mid aan aqoon u baahnayn? Talaw miyuu jiraa wax aan aqoon u baahnayn? Haddii aanay aqoon u lahayn miyaanay indhaha ka ridayn hawsha gurmadka dadka tabaalaysan?
Sh. C.Raxmaan oo ka mid ah guddida markii uu tirinaayay caqabadaha waawayn ee ka hor yimid wuxuu ku daray, inay marar badan raashin iyo taageero siiyeen dad aan u baahnayn, taasi miyaanay caddaynayn in dadka gurmadka la siinaayay in aanay diiwaan-gashanayn? Taasi miyaanay musuq-maasuq ahayn? Maadamaa ay guddidu sahashay in qof aan u baahnayn raashinkan inuu qaato oo uu walibana uu ku qayilo (sida uu sheekhu sheegay) miyaanay taasi caddaynayn in qofkani raashinkan uu ka qaaday qof kale oo dhab ahaan u baahan? Markaa marka ay guddidu siisay qofkii aan u baahnayn taasoo saamaysay qofkii u baahnaa, miyaanay taasi musuq-maasuq ahayn? Haddii taasi aanay musuq-maasuq ahayn talaw waa maxay musuq-maasuqu?